အရွယ်ရောက်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏အံ့ဖွယ်များကိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အလွန်ကျန်းမာသောလက်တွေ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ orgasms အားလုံးသည်အညီအမျှအကျိုးရှိသည်၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှုကဲ့သို့သောအရာမရှိသကဲ့သို့ဆိုးရွားသည့်အကျိုးဆက်များလည်းရှိသည်ဟုသင်ကြားဖူးပါသလား။ မဟုတ် အလွန်မကြာခဏ masturbating?
သို့ဆိုလျှင်ဤကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယုံကြည်မှုများသည်ကြားနာခြင်းထက်အနည်းငယ်သာသာကျပြီးသိပ္ပံပညာကအမြဲတမ်းအထောက်အပံ့မပေးသည်ကိုသင်အံ့သြမိပါလိမ့်မည်။ စင်စစ်အားဖြင့်သုတေသနအဖွဲ့သည်သူတို့ကိုအားနည်းစေသည်။ သုတေသီ Rui Miguel Costa သည်သုတေသနတွင်ဖော်ပြထားသည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း: "တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Psychopathology နှင့် Prostate အလုပ်မဖြစ်မှ Related ဖြစ်ပါသည်။ " ထိုအ 2017m ၏အုပ်စုတစု ဆွစ်သုတေသီများကဆိုသည်လိင်တူဆက်ဆံမှုကျေနပ်မှုနည်းခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘ ၀ နှင့်ကျေနပ်မှုနည်းခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Costa, 2012; Gerressu, Mercer, Graham, ရေတွင်းများ & ဂျွန်ဆင်, 2008) ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်မာသောသတင်းအချက်အလက်များသည်ယနေ့အထူးအရေးကြီးသည်။ အမြန်နှုန်းနှင့်အဆုံးမဲ့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည့်အသစ်အဆန်း - at-a-click သည်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အလုံအလောက်ရှိသည့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အချက်ပြမှုကိုကျော်လွှားရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်ယနေ့နှစ်ဆယ်ကြာသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းသည်တူညီသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်“ သင့်အတွက်ကောင်းသည်” ဆိုလျှင်အင်တာနက် porn ကို အသုံးပြု၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုပြုလုပ်ရန်သင့်ကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မည် အပို ကျန်းမာသန်စွမ်း။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာငယ်ရွယ်နုပျိုယုတ္တိဗေဒ!
တစ်စုံတစ်ယောက်သည်တစ်ကိုယ်တော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်၏လိင်ဆန္ဒကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်မြင်တွေ့ရရုံသာဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်းလူကြိုက်များသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ဒဏ္fiveာရီငါးခုတွင်ပိန်လှီနေသည့်အရာမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
ဒဏ္ာရီနံပါတ် ၁ -“ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိခိုက်စေဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး”
ယောက်ျားတွေ (နှင့်ပင်အချို့ gals) ၏ထောင်နှင့်ချီသောညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေထွက်ဖြတ်တောက်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယာယီ အကြီးအကျယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလျှော့ချ / ရှောင်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု-အမည်ရ, အံ့သြစရာအကြိုးခံစားခှငျ့အတွက်ရရှိလာတဲ့နေကြသည်။
သင်တို့ကဲ့သို့ဖိုရမ်များအပေါ်၎င်းတို့၏အစီရင်ခံစာများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီတစ်ခုတစ် 90 ရက်ကြာစိန်ခေါ်မှုအရာ။ ဤတွင်အခြား site ကနေ3Self-အစီရင်ခံစာများ (များမှာပိုပြီး Self-အစီရင်ခံစာများ):
ငါက 20-တစ်ခုခုနှစ်အရွယ်ကောင်လေး နှင့် [ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း] ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆက်ဆံရေးများစွာကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ငါအလွယ်တကူစိတ်ဆိုး, အလွန်အမင်းဝေဖန်, ရှက်ခြင်းနှင့်မလုံခြုံ - စာရင်းဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတကယ်ငါ့လက်၌ပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့ (pun ရည်ရွယ်) မသိဘဲပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီက porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပေမယ့် MAN ငါခြားနားချက်ခံစားခဲ့ရ! ငါဟာပိုပြီးသတိထားမိလာတယ်၊ ပိုပြီးပျော်ရွှင်လာတယ်၊ လူမှုရေး၊ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့တည်ငြိမ်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကကျွန်ုပ်သည်အစွမ်းထက်သောပုလ်နှင့်အတွင်းစိတ်အေးဆေးမှုအဖြစ်သာဖော်ပြနိုင်သည့်အရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာဘဝဖြစ်သင့်သောအရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းလိမ္မာ, အထွက်, hyperactive နှင့်ဖန်တီးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ (မထွက်ခွာမီ) ကျွန်ုပ်သည်မလုံခြုံမှု၊ ရှက်တတ်မှု၊ ခွင့်ပြုချက်ရရန်ကြိုးစားနေသည်၊
ငါဖြစ်၏ 21 နှစ်ရှိပြီ, ငါနောက်ဆုံးအများအားဖြင့်အသုံးမကျသောနှစ်ပေါင်းအားလုံးအဘို့အတက်သည်လုပ်ရန်အရာများစွာရှိသည်တူသောငါခံစားရတယ်။ ငါ PMO ၌လုပ်ကြလျှင်ငါ spineless ဖြစ်လာဟုပြောအလေးအနက်ထားလျော့နည်းသွားသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိ၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုလည်းမရှိ၊ ထိုအခါငါအလေးအနက်ထားဤကဲ့သို့သောအသကျရှငျနှစ်ပေါင်းများစွာကြပြီ။ အခုတော့ငါဟာထိန်းချုပ်မှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဒါက ၂၂ ရက်ပဲ။ မင်းရဲ့စွမ်းအင်ကိုစုဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမင်းရဲ့အတိတ်ကကြီးမားတဲ့နံရံတွေကဒူးမြင့်တဲ့ခြံစည်းရိုးတွေဖြစ်လာပြီးအဲဒီနေရာကိုကျော်ပြီးကျော်လွှားရလိမ့်မယ်။
အခြားသောနေ့, ငါတှေ့ ငါနာတာရှည် masturbating နှင့်အပြီးစတင်ရှေ့မှအစီရင်ခံစာကတ်များနှင့်ဆရာ evals ကွဲပြားခြားနားသော။ ငါ၏အစွမ်းဆောင်ရည် (အဘယ်သူမျှမ Pun ရည်ရွယ်ပါသည်) နှင့်ငါ့ဆရာငါ့ကိုအကဲဖြတ်လမျး၌နှစ်ဦးစလုံးအတွက်သိသာခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။ ငါကအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက် whacking စတင်မတိုင်မီအကြှနျုပျ၏ပညာရှင်တွေရှင်းလင်းစွာအားကောင်းခဲ့ကြသည်။ ဟုတ်ကဲ့, တကတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်ရိုးရိုးသားသားမည်မျှပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းနဲ့ကျွန်မတိုတောင်းတဲ့ခဏပိတ်ထား lay သောအခါငါဖြစ်၏အာရုံစူးစိုက်ကိုသတိပွုမိပြီးနောက်ဒါမစဉ်းစားကြဘူး။
သုက်မဖြစ်သောသုက်ပိုးများမည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း။ အဆိုအရ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၏“ NakedScientist” ဖိုရမ်,
သူတို့ရဲ့ရောင်း-by-date ဖြစ်အောင်ရောက်ရှိပြီသုက်ပိုးသွေးဆဲလ်ပြိုပျက်ရရဲ့ပွောဆိုကွကုနျအံ့, ထိုတူညီသောလမ်းအတွက်ပြိုပျက်ရ။ နှင့်အခြေခံအားဖြင့်မည်သည့်အတွက်သုက်ပိုးအတွက်အာဟာရနှင့်၎င်း၏ Goodies ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကိုပြန်ပြန်လည်အသုံးပြုရ။
ဒဏ္ာရီ ၂ -“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အရာမရှိပါ”
ယောက်ျားတွေလည်းအများကြီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြောင်းသတင်းပို့ထားပါသည် အတိအကျ ဒီနေ့အမြန်နှုန်းမြန်တဲ့ porn နဲ့အတူဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသောအချို့သောလက္ခဏာများဖြစ်သည် Self-အစီရင်ခံစာများ မိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ):
အနာများ၊ အရည်ကြည်ဖုများ၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ တံတွေးထွေးခြင်း၊
ပါးစပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို“ ခံစားရ” စွမ်းရည်များမဆုံးရှုံးခြင်း
အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်, uncharacteristic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာနှင့်အတူစစ်မှန်သောလိင်အတွက်အကျိုးစီးပွားအရှုံး
ဒါကြောင့်လျော့နည်းပျြောမှေ့စဖြစ်လာနေသည်ကိုမကြာခဏကွောငျ့, ထှတျအထိပျဆိုင်းငံ့ရန်နာရီ Edging
သည်အခြားနာတာရှည်စွဲ-related လက္ခဏာတွေထိုကဲ့သို့သော uncharacteristic လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ဦးနှောက်မြူ, စိတ်ကျရောဂါ, နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်ပြင်းထန်သောအဖြစ် ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ သူတို့က, စတာတွေကိုရပ်တန့်သည့်အခါ
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသိပ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစုံစမ်းစစ်ဆေးမဟုတ်လော ဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့-အတော်လေးမကြာသေးမီကသည်အထိ-လူအနည်းငယ်ကအလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏နံရံသို့ဆော။ သူတို့အလုံအလောက်ရှိတဲ့အခါသူတို့ကဆေးလိပ်ဖြတ်
အဆိုပါတရားခံယနေ့အင်အားစိုက်ထုတ်လက်လှမ်းဖြစ်ပါသည် အစဉ်အဆက်-ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ override ဖို့လုံလောက်တဲ့ပူ ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနှင့်ပင်အချို့သောပစ် စွဲလမ်းသို့ဦးနှောက်။ ဤသည်အသစ်သောဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသုတေသနသည်လက်တွေ့နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပုံပြင်များစွာသည်နှလုံးနွေးထွေးစေသောအမြန်နှုန်းမြန်၏အခန်းကဏ္evidentကိုထင်ရှားစေသည်။
ငါကာယဗလ အော်ဂဲနစ်အစားအစာများနှင့်ကယ်လိုရီအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကိုပင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည် ၂၂၀ မှ ၁၈၀ အထိသွားခဲ့သည်။ ငါဘာမျှမပျောက်ဖြုန်းတီးခဲ့သည်။ လူတွေကိုပတ်ပြီးဒီထူးဆန်းတဲ့အဓိပ်ပါယျမရှိတဲ့ကွောကျရှံ့မှုတှကေိုငါစတငျခဲ့တယျ။ ငါမတည်ငြိမ်သောနှင့်အားနည်းခံစားရတယ်။ ဒါကအဓိပ္ပာယ်ရှိရင်ငါ့ရဲ့အသံကပိုလွန်းသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ် ငါအဆက်မပြတ်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သည်။ ငါအိမ်မှမထွက်တော့ပါ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာတယ် ဒါနဲ့အခုငါကလူမှုရေးအရအဆင်မပြေတဲ့ဖျော့ဖျော့ပေါ့။ ငါကျောင်းဝင်း၏ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်… wtf! ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းခြင်းနှင့်ရိုက်နှက်ခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အခြားမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုမပြောင်းလဲခဲ့ပါ။ ဒါပဲ။ ငါအပြုသဘောတွေးနေဆဲ, အရက်ဆိုင်သို့သွား, ကျန်းမာစားခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်း, ထိုအဂျက်စ်။ တိုးပွားလာသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာကြည်လင်သော pixelated screen ပေါ်ရှိမိန်းကလေးအတုများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အချစ်ရေးကိစ္စဖြစ်သည်။ ငါအရက်မူးပြီးနောက်အများကြီးအာရုံစူးစိုက်သို့မဟုတ်နားမလည်နိုင်ဘူးတူသောငါအလေးအနက်ထားခံစားရတယ်, အချို့ရက်ပေါင်းငါသည်ငါ့မျက်လုံးအစွန်းအလွန်ဆိုးသောကြောင့်အချို့သောရက်ပေါင်းငါစာသားအိပ်ရာစီးနင်း ... ။
“ ခေါင်းစဉ်ရှိတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုမှာhypersexuality အမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာဝိသေသလက္ခဏာများသုတေသီများကတစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်နာရီတစ်နာရီသို့မဟုတ် ၇ နာရီအထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အမျိုးသားများအကြားတွင် ၇၁% သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပြီး ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းကမူမိတ်ဖက်များနှင့်ပြdifficultyနာတက်နေသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီသည်ဖုန်းမရှိသော ၀ န်ထမ်းများအားလမ်းညွှန်ရန်အတွက်စမတ်ဖုန်းအသစ်များကိုရောင်းချခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှော်မှော်ညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာကိုမတွေ့မီအချိန်ကသာကိစ္စဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်သူသည်ကုမ္ပဏီကားထဲတွင်လမ်းပေါ်တွင်ကားမောင်းနေပြီးအခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အတူအဝေးပြေးလမ်းတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေသည်။ ဒါ့အပြင်သူကသူ့ဇနီးနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေပါတယ်၊
ဒါ့အပြင်သူက (porn သို့မဟုတ် porn စိတ်ကူးယဉ်မပါဘဲ) အာရုံခံစားမှုမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဝတ္ထုမိတ်ဖက်၎င်း၏အဆုံးမဲ့စီးနှင့်အတူညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းထက်လျော့နည်းပြင်းထန်သောနှင့်ဖျန်ဖြစ်မည်အကြောင်းပေါ်လာသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များတစ်ဝတ္ထု pornstar မှ masturbating ကြောင်းလေ့လာသင်ယူကြပါပြီ သုက်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုနေတယ်သုက်ပိုးတိုးပွါး (အကျွမ်းတဝင်မင်းသမီးမှ masturbating နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) ။ ထို့အပြင်သုတ်ရည်လွှတ်သည့်အချိန်သည်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းဟာပိုကောင်းတဲ့သုတ်ရည်နဲ့ပိုမြန်တဲ့သုတ်ရည်လွှတ်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ အပို - စုံတွဲချိတ်ဆက်မှု (ပစ်မှတ်နှစ်ခုရှုထောင့်သာရှိရင်တောင်မှ) ကိုပိုမိုထိရောက်စေတယ်၊ နှင့် ပိုပြီးအကုန်အကျ။ တစ်ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာသုတေသနကိုလည်းဦးနှောက်ထဲမှာ သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ် circuit ကိုလှုပ်ရှားမှုပြသထားတယ်။
ကန့်သတ်အားလုံးသဘာဝများမှာ အခြား သောက်သုံးရေ, အစာစား, လေ့ကျင့်ခန်း, နေရောင်အတွက်အချိန်, အလေးချိန်-ရုတ်သိမ်းနိုးတည်းခိုသို့မဟုတ်အိပ်ရာများတွင်တည်းခိုခြင်းရှိမရှိဇီဝကမ္မလှုပ်ရှားမှုများ။ ထို့အပြင်အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကန့်သတ်ရှိသည်။ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအနေဖြင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်မှီကြွက် ejaculate လျှင်ဥပမာ, သူတို့ပြသ မှတ်သားလက္ခဏာတွေ။ လူသားတွေဟာကိုလည်းကန့်သတ်ရှိသည်။ သည်အခြားမျိုးစိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဥပမာ, အလားအလာလူ့သုက်ပိုးအတန်ငယ်ဖြစ်ပါသည် အလွယ်တကူကုန်ခမ်း.
ယခုသို့သော်ဖြည့်ညှင်း၏အုပျခြုပျနေဖြင့် Self-အပျြောအပါးန့်အသတ်သောယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲစွာအမြစ်တွယ်နေပြီးနေဆဲဖြစ်သည်။ လူတွေကိုစွဲလမ်းသို့ချော်အဖြစ်ကြောင့်ဤအယူဆချက် (အပိုင်းများတွင်ပျေါလာနိုငျအတွက်ကျေးဇူးတင် supernormal ဆွ highspeed porn) ၏, သူတို့ကရောင်မှားယွင်း မတရားသော တစ်ဘို့ နဂါးလိင်စိတ်။ တစ်ဦးက 30 နှစ်အရွယ်ကပြောသည်
ထှတျအထိပျသို့မဟုတ် edging ၏အဘယ်သူမျှမငွေပမာဏတစ်ရပ်ကျေနပ်ပါလိမ့်မယ် စွဲကဦးနှောက်စှဲရသူကား, ဒါကြောင့်သူတို့အ ခံစား သူတို့အလုံအလောက်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှလိုပဲ။ ဒါ့အပြင်လာသောအခါပြင်းထန်စွာနုတ်ထွက်စွဲနေသောယောက်ျားတွေသူတို့မကြာခဏယာယီပေမယ်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတွေ့ကြုံခံစား လိင်စိတ်နှင့် penile sensitivity ကိုအတွက် dropအခြားအရောကျသောဖော်ပြဘဲ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ-which ညာဘက်ကျော highspeed တစ်ဦးထိတ်လန့်အတွက် porn, မိမိတို့စွဲလမ်းသို့နက်ရှိုင်းကသူတို့ကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒဏ္ာရီ ၃ -“ အော်ဂဇင်က orgasm ဖြစ်”
အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ညီမျှကြောင်း, Kinsey ၏အချိန်ကတည်းကသူကအခိုင်အမာထားပြီး, ဒါပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားတွေကထောက်ခံဘူး။ ဒါကတကယ်တော့ထက်သဘောတရားပိုတစ်ခုအခိုင်အမာဖြစ်ခဲ့သည်။ -Stuart Brody, သုတေသနစိတ်ပညာရှင်
လိင်ဆက်ဆံမှု (PVI) ပိုကောင်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးပိုကောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ် quality-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အခြားမိတ်ဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဆိုသည်:
ငါသည်ငါ့ခင်ပွန်းနှင့်အတူ orgasm ရှိခြင်းခဲ့ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းအော်ဂဇင်ပြီးနောက်နံနက်စိတ်ကျရောဂါရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lovemaking ထွက်ပန်းခင်းလမ်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအော်ဂဇင်ကိုတက်ဖုံးလွှမ်းဖြည့်သမျှသောချစ်ခင်တဲ့မုဆိုးမအဖြစ်အကြှနျုပျအပျေါရှိပုံရသည်။ တစ်ဦးကိုခစျြတစျဦးနှငျ့တ Climaxing ဗလာနှုတ်ခမ်းနှင့်လိင်အင်္ဂါနှင့်အတူ climaxing ထံမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ရှင်းပြအဖြစ် မေတ္တာတော်၌တည်နေရန်ပျင်းရိ Way ကိုအချို့အပြုအမူတွေအဖြစ်ဦးနှောက်၏စရိုက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန် ပူးတွဲမှုတွေကို။ ထိုသို့သောရောဂါများသည်လူသားများကိုနှောင်ကြိုးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့က ဦး နှောက်၏ခုခံကာကွယ်မှုကိုသက်သာစေပြီးအမိဂဒလတွင်အောက်တိုတိုကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်သဘာဝကျသည့် Anti- စိုးရိမ်ပူပန်မှုယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပုံမှန်နွေးထွေးသောထိတွေ့မှုကိုပြသခဲ့သည် သွေးဖိအားကိုလျှော့ချအထူးသဖြင့်အမျိုးသားများတွင်။
တစ်ကိုယ်တော်လိင်မတစ်လမ်းအတွက်တစ်ဦးကို attachment cue အဖြစ်ချစ်ခင်လိင်ဆက်ဆံမှုမှတ်ပုံတင်ပါသလား ဆက်ဆက်ကွဲပြားမှုပင်နှစ်ခုလှုပ်ရှားမှုများ၏ဟော်မုန်းလက်မှတ်ပေါ်လာမှာ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထှတျအထိပျလွှတ်ပေးနှင့်အတူ intercourse လေးဆ prolactin တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, အချိန်များအတွက်လိင်ကိစ္စအလိုဆန္ဒပေါ်ဘရိတ်ထားရန်ကူညီပေးနေ။ တနည်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသောအထွတ်အထိပ်သက်ရောက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌လဲလှယ်ကြသည်မဟုတ်။
ဒါဟာအီဗိုလူးရှင်းအနာဂတ်မှာသို့ဗီဇကျု့ံနိုငျသောအပြုအမူတွေကိုမျက်နှာသာပေးသည့်သဖွယ်ဖြစ်သောကြောင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်အခြား Jolly ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကမ်းလှမ်းကြောင်းစုံလင်သောသဘာဝကျပါတယ်။ ကနှောင်ကြိုးမိဘများကူညီပေးသည်တိကျစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချစ်ခင်ထိတွေ့မှုတစ်ခုလဲလှယ်ဖြစ်ကောင်းအဖြစ်ကြိုးက register လုပ်သွား-နှင့်သားစဉ်မြေးဆက်နှင့်အတူ နှစ် ကျိန် ဆို. ပူဇော်စောင့်ရှောက်သူများပိုကောင်းရှင်သန်မှုလေးသာမှုရှိသည်။
Brody နဲ့တခြားသူတွေထောက်ပြသကဲ့သို့ထို့အပြင်, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် PVI ဆုချသည်ဟု psychobiological ယန္တရားများအဘို့ကိုရွေးပါလိမ့်မယ်-ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့မက်လုံးပေးတာကကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ ယနေ့သဘာဝလွန်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်လုပ်နိုင်စွမ်းထက်မကပါ ကွာအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်သွေးဆောင် PVI (နှင့်မျိုးဗီဇမသေခြင်း) ၏အကျိုးကျေးဇူးများအနေဖြင့်။
သိသာထင်ရှားတဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်ယနေ့လည်းလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်းသူတွေထဲမှာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာပင်ဖြစ်လျှင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိတ်မုန့်ပေါ် icing မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့, သာ. ကြီးမြတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေအသက်တာ၏အတော်ကြာရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. မကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် လွတ်လပ်စွာ PVI အကြိမ်ရေများနှင့်ပင် PVI အချို့အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျော့သွားပုံရသည်။
သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်လိင်ဆက်ဆံမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ် masturbation နှင့်သင်အောက်ပါလကျထကျကျြောကိုစောင့်ရှောက်မည်အဘယ်အရာကိုမြင်။
ဒဏ္Myာရီ ၄ -“ မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင့်လိင်ဘဝကိုအကျိုးပြုသည်”
သငျသညျ သာ. ကွီးမွတျတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေအတွက်ချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းသိခဲ့ပါ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်မကျေနပ်မှုများနှင့်မိတ်ဖက်များအတွက်လျော့နည်းမေတ္တာနှင့်? သာ. ကွီးမွတျတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းကိုလည်းပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမျကို attachment နဲ့နုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးယန္တရားပိုမိုသွေးဖိအား reactivity ကိုအပါအဝင်ဆင်းရဲတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၏အခြားအညွှန်းကိန်း, နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ ဒီသုတေသန တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမသက်သေပြဘူး အကြောင်းတရားများ ဤပြproblemsနာများဖြစ်သော်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာရေးလုပ်သည်ဟုအခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းသည်ခက်ခဲစေသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်သင်ဟာမိတ်ဖက်တစ်ယောက်ရှိဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘီလ်မာဟာရဲ့နောက်လိုက်ပါ Hilary အကွံဉာဏျ အနည်းဆုံးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်သင်၏အောင် ဒုတိယ ရှေးခယျြမှု။
ဒဏ္ာရီ # ၅ -“ မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကဆီးကြိတ်ကင်ဆာကိုကာကွယ်ပေးသည် "
မသိရသေး။ ဒါဟာအော်ဂဇင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည် မှအဓိကအားဆက်စပ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း အခြားလူ့ဖြစ်လျက်ရှိနှင့်အတူ, အထူးသ penile-အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု (PVI) မဟုတ် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ သို့သော်လက်ရှိဆီးကျိတ်ကင်ဆာသုတေသနပြုချက်အများစုသည်မရွေးချယ်သောမေးခွန်းများမေးခြင်းဖြင့်ဤအဖြစ်မှန်ကိုအမှတ်မထင်ဖုံးကွယ်ထားသည်။ သုတေသီများကသန္ဓေတည်ခြင်းအားလုံးသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယူဆသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ PVI နှင့်အခြားအော်ဂဇင်ထုတ်လုပ်မှုအပြုအမူကို“ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း” ဟုသာမှတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကလိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများ၏အမှတ်တရများကိုမှီခိုအားထားခဲ့ရသည်။
ရလဒ်များမဟုတ်ဘဲအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ကိုက်ညီမှုရှိကြ၏။ ၏သုတေသီများအဖြစ် လေ့လာမှု ဒဏ္Myာရီ # ၅ ကိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့်အများဆုံးကိုးကားဖော်ပြသည်မှာလေ့လာမှု ၉ ခုသည်စာရင်းအင်းအရသိသာထင်ရှားသောသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောအပြုသဘောဆောင်သောအသင်းအဖွဲ့များရှိကြောင်း၊5လေ့လာမှုများအဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့အစီရင်ခံခဲ့သည်; လေ့လာမှု (၇) ခုသည်စာရင်းအင်းသိသိသာသာ (သို့) သိသိသာသာပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နှင့်လေ့လာမှုတစ်ခု U-shaped ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ " လေ့လာမှုတစ်ခုအရတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတစ်မျိုးတည်းသည်သုတေသီများနောက်ဆုံးမှစဉ်းစားသောအခါ ၂၀၊ ၃၀ နှင့် ၄၀ အတွင်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုမြင့်မားစေသည့်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ PVI ထံမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလှုပ်ရှားမှုခွဲခြား (2009 အတွက်) ။ PVI ဖြစ်သက်သေပြ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သော အသက်အရွယ်နုပျိုသောအမျိုးသားများတွင်သက်ရောက်မှုအတွက်အသက်ကြီးသူများနှင့်ကြားနေအတွက်ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေး၏။ တစ်ဦးက ပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု ပိုပြီးမကြာခဏသုက်အတွက် 19% လျော့နည်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်များစွာသောမေးခွန်းများကိုထိုကဲ့သို့သောသုတေသီများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားသည်အခြားဘယ်အရာကိုအဖြစ်ဖြေရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုအထူးသဖြင့်အကာအကွယ်ပေးလျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှုန်းထားများအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုထင်မြင်နိုင်သည်။ ကြည့်ရသည်မှာထိုသို့မဟုတ်ပါ။ အမြန်ရှာဖွေခြင်းသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုလေ့လာသည့်လေ့လာမှုနှစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် ၆၂၂၂၆ တို့၏မှတ်တမ်းကိုဆန်းစစ်။ ပထမဆုံးတွေ့ရှိချက်မှာ“ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာမှသေဆုံးမှု ၁၂ ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် 19.8 မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်"နှိုင်းယှဉ်အထီးနှုန်းထားများအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ အခြားလေ့လာမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အဘယ်သူမျှမကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် 1432 ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်အခြားလူတို့သညျအကြားဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှုန်းထားများ၌တည်၏။
ထုတ်စစ်ဆေးဆီးကျိတ်ကင်ဆာအားလုံးကိုလူသိများအန္တရာယ်အချက်များဖုံးမရရှိနိုင်သိပ္ပံ Explore ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်အချက်များ by ကင်ဆာသုတေသနဗြိတိန်။
ဒီ Read တစ်ဦးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအကြောင်းကိုဆောင်းပါး.
ထို့အပွငျအတော်လေးဆိတ်ကွယ်ရာဆီးကျိတ်ကင်ဆာကနေ, ED နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်, မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုအခြားသူနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည် ဆီးကျိတ်၏ပြဿနာများအဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်တိကျတဲ့ကိုပဲအဆင့်ဆင့်နှင့်ရောင်ရမ်းသို့မဟုတ်နူးညံ့သောဆီးကျိတ်အပါအဝင်။ တနည်းအားဖြင့်ကျန်းမာဆီးကျိတ်ရန်သင့်လမ်း masturbate ဖို့ကြိုးပမ်းမှုထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါ့အပြင်အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဇူလိုင်လ, 2017 ကြေညာချက်အားဖြင့်ဖြစ်တယ် ရစ်ချတ် Wassersug ပါရဂူဘွဲ့, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကျွမ်းကျင်သူ နှင့်ဌာနဆေးပညာပါမောက္ခ, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံဦးစီးဌာန၌ဆေးပညာဌာန:
"ငါသည်သုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေများနှင့်ဆီးကြိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်ကြားက (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) တစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကိုဖေါ်ပြခြင်း၏သိသောအဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုအကောင်းရည်ရွယ်ချက်ဒေတာရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်အန်ဒရိုဂျင်ဆုံးရှုံးမှုရှိသော MtF အတွက်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့မှာဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုအလွန်နည်းပါးပြီးအော်ဂဇင်၏စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်ကျသည်။
ယခုလူကြိုက်များသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ဒဏ္myာရီများကိုပြန်လည်စဉ်းစားပြီးသည်နှင့်ဤလူငယ်သည်သင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပါ။ အဘယ်အရာကို nofap ငါ့အားပြုတော်မူပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလအနည်းငယ်ကြာစိန်ခေါ်ပြီးမင်းသတိထားမိတာကိုကြည့်ပါ။ လူတိုင်းရဲ့ ဦး နှောက်နဲ့အလေ့အကျင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းမှရလဒ်များသည်သင့်အတွက်အရေးပါသည်။
Addendum: ဖော်ပြရန်အတွေ့အကြုံများနှင့်အရွယ်ရောက်ရိုမန်းတစ်အပေါင်းအဖေါ်များအကြား Cuddling ၏လိင် vs. ပွား aspect
လေ့လာမှုမှ -Partners လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်အဆိုးတိုက်ပိတ်လိင်နှင့်အတူအပြုသဘော [ဆက်စပ်မှု] ကြိမ်နှုန်းနှင့်ခံစား Cuddling။ " တစ်နည်းဆိုရလျှင်တစ်စုံတစ် ဦး သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလေလေသူသည်ချစ်ခင်ထိတွေ့မှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်အချိန်ကုန်လွန်လာလျှင် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းလာကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
Addendum: လူမှုရေး, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူငယ်လူရွယ်တွေထဲမှာလတ်တလောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပုံစံများအတွက် Relational ကွဲပြား
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ သာ. ကြီးမြတ်မပျော်ရွှင်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမိုပျော်ရွှင်မှုကိုလျော့နည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ လူတွေဖက်လိင်အများကြီးရှိပါကနှင့်ကြီးမားသောအံ့အားသင့် (ဤနေရာတွင်အမြီးအမောက်), သူတို့ကအနည်းငယ်သာ masturbate လေ့ရှိပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါ NHSLS ဒေတာယောက်ျား၏ 29 ရာခိုင်နှုန်းကို 18-24 အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ် masturbating အစီရင်ခံအသက်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု: ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာပါပဲ။
အဆိုပါ NFSS ကလည်း 35-18-ယခုနှစ်တွေ့ကြောင့် 24 ရာခိုင်နှုန်းကအသက်ကြီးအတိတ်နေ့က-ဖြစ်စေယနေ့သို့မဟုတ်မနေ့ကအတွက် masturbated တော်မူပြီးမှသတင်းပို့ပါ။ လွန်ခဲ့သောခြောက်ရက်ပတ်လုံးပတ်ဝိုင်းမှတိုးချဲ့သည့်အခါ, ထိုကိန်းဂဏန်းရာခိုင်နှုန်းကို 68 ဦးအထိမြင့်တက်။
အဆိုပါဆောင်ရွက်မှုများကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်-နှင့်လူမှုရေးမဟုတ်ပေမယ့်လိုလားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတိတ် 20 ကျော်တချို့လျော့ခဲ့ကြပေမည် years-ဒါဟာလက်ထက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခုမျှသာ uptick မဟုတ်ဘဲလူတို့တွင်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောမြင့်တက်မဟုတ်အကြံပြုထားသည်။
18-24 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးများကိုးရာခိုင်နှုန်း, ပု 1992 NHSLS အတွက်တစ်ချိန်ကတစ်ပါတ်ပျမ်းမျှ masturbating အစီရင်ခံတင်ပြသွားရမည်အကြောင်း အတိတ်-ရက်သတ္တပတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည့် NFSS အတွက်တူညီနေအရွယ်အမျိုးသမီးများ 36 ရာခိုင်နှုန်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သေချာစေရန်, ဒီအချို့သောအဘို့ကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဝန်ခံအတွက်နှစ်သိမ့်တိုးမြှင့်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်တစ် 300 ရာခိုင်နှုန်း-တိုးဝန်ခံချက်၏ဖြေလျှော့ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာကြောင့်ကြောင်းအကြံပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်, အထူးသဖြင့်ပေးထားသောယခု-နေရာအနှံ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏တင်းကျပ်စွာအသင်းဆုတ်ယုတ်စားပွဲအတွက်မှတ်ချက်ချသည်။ 1992 မှာတော့ရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရှိ၏။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့စစျမှနျသောဝယ်လိုအား 20 နှစ်များတွင်တိုးမြှင့်နိုင်ပေမယ့်, အနည်းပညာဆိုင်ရာဆွနှင့်ဝယ်လိုအား၏လူမှုရေးအားပေးမှုဆက်ဆက်တိုးလာခဲ့ပါသည်။
သုခချမ်းသာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်အကြားကဒီမှာနှင့်အခြားနေရာများတွင်မှတ်တမ်းတင်ပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့များပေးထား, ပို. ပို. -မကြာခဏ (ထက်ကြိုကြားကြိုကြား) ၏အထောက်အထားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခေတ္တရပ်တန့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးစေခြင်းငှါသင့်၏။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိသိသာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကိုဝါကြွားတတ်နေစဉ်, မကျယ်ပြန့်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ထွန်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကုန်ကျစရိတ် extract နိုငျသညျ။
... အမှန်မှာထို NFSS-နေကြသည် ပို. ပို. မပေးရုံ 21st ရာစုလူမှုရေးအချက်အလက်များအဖြစ်ပေမယ့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ဖို့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအဖြစ်သဘောပေါက်ခံရထဲမှာညစ်ညမ်းဆွနှင့် concomitant တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-နှစ်ဦးစလုံးသိသာကြီးထွား။
Addendum: ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ် အမြိုးသမီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orgasm - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အမျိုးသမီးများအတွက်အော်ဂဇင်အကြိမ်ရေကိုမတိုးတက်စေပါ။
Addendum: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတွက်ပါဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ: တစ်ဦးက Multi-factorial အမြင်။ ကောက်နုတ်ချက်:
(က) မြင့်မားသော dyadic [တွဲဖက်] လိင်ဆန္ဒများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့ပြီးအပြုသဘောဆောင်သောဆုလာဘ်များနှင့်ချုပ်တည်းမှုစွမ်းရည်များရရှိရန်တွန်းအားပေးလိုသောစိတ်ဆန္ဒများအကြားမျှတမှုရှိသည် (မြင့်မားသောချဉ်းကပ်မှုလှုံ့ဆော်မှု၊ , မြင့်မားသော Self- ထိန်းချုပ်မှု, မြင့်မားသောသတိ); (ခ) dyadic နှင့်တိုက်ပိတ်ခြင်းဆိုင်ရာလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သူများသည်အတန်အသင့်ကျေနပ်မှုရှိပြီးစိတ်ဓာတ်ရေးရာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားကိုအဓိကအားဖြင့် impulsivity (အမျိုးသမီးများအတွက်ဆုများရရှိရန်အလွန်အမင်းမြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ချုပ်တည်းမှုနိမ့်ကျခြင်း) ကိုပြသခဲ့သည်။ (ဂ) dyadic လိင်အလိုဆန္ဒနှင့်လှုပ်ရှားမှုနိမ့်ကျသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များနှင့်ချုပ်တည်းမှုနိမ့်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည် (မြင့်မားသောရှောင်ရှားခြင်းလှုံ့ဆော်မှု၊ မလုံခြုံသောတွယ်တာမှုနှင့်သတိမဲ့မှု) ။
တစ်ဦးက redditor တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အရေးပါသောသုတေသနစုဆောင်း